Nchebe nke Atụrụ? | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 30, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M hụrụ n'anya ọchị Gary Larson si Akụkụ Dị Anya ama:
Ndị ụlọ ọrụ na-azọrọ na n'ihe ize ndụ na-ajụ na anyị na-niile conditioned na e nwere n'ụzọ ụfọdụ nchekwa na nọmba:
Ndị ahịa ole ka ị nwere?
Afọ ole ka ị nọrọ n’azụmahịa?
Biko nye anyị ntụnye aka.
Nye anyị ihe ọmụmụ ọmụmụ nke dabara na ụlọ ọrụ anyị, ogo ụlọ ọrụ, ngwaahịa, ọrụ, wdg.
Anyị na-agụ isiokwu a site na [fanye nnukwu ụlọ ọrụ] nke na-enye echiche na-emegide, biko kọwaa.
Ka anyị lelee ihe atụ nke ìgwè ehi, na ndị anyị na-eso kemgbe ọtụtụ afọ:
Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka United
Nke ise Bancorp
PNC Ego Ọrụ Otu
Gọọmentị United States
Ieslọ ọrụ ahụike
Ieslọ ọrụ inshọransị
Mba daalụ, agaghị m eso ìgwè ehi mgbe ọ bụla.
Dee 31, 2008 na 11: 03 AM
Ọ bụ na mgbasa ozi ọha na eze ọ bụghị naanị ìgwè ka mma? Ekwenyere m na ịgbaso ìgwè ehi abụghị, n'onwe ya, ọ bụ nnukwu ihe ịme, mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu gbasara igwe na aha. Ìgwè ehi ahụ gwara anyị na Google bụ ezigbo ụlọ ọrụ nyocha, m ga-ekweta na m sooro nke ahụ. N'otu aka ahụ, ìgwè ehi na-egosiputa ngwaahịa ọ na-enwe obi ụtọ na (Apple) na enweghị obi ụtọ na (GM, Ford).
Ajuju bu, obi adighi anyi nma n’iso ìgwè ehi, ka o bu na anyi napu na mberede n’aghari wayo mgbe otu ìgwè hapuru ihe o na-eso? Ọtụtụ n'ime ihe atụ ndị dị n'elu ebe ìgwè anụ ụlọ sochiri, ma a na-agbahapụ ha ugbu a na otu ìgwè ahụ.
Dec 31, 2008 na 2:29 PM
N'ezie, echeghị m na mmadụ mgbasa ozi bụ otu oru oma - anyị niile na-agbasa na anyị onwe ha (ọ bụ ezie na njikọ) obodo - blọọgụ, twitter, mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe, enyi, netwọkụ Ning, Njikọ Na, xo. Echere m na ndị folks na-amalitebebe obere obodo 'micro' pere mpe ebe ha na-achọta ndị nwere ụdị uto, nkwenye, agụmakwụkwọ, onyinye, ihe omume ntụrụndụ na nzụlite.
Google na-ebipụta nsonaazụ na-adabere na mkpa, yabụ okwu dị iche iche - “ọnụ ala” na “ọnụ ala” nwere ike ị nweta nsonaazụ dị iche iche maka onye nwere ebumnuche ọchụchọ ahụ dabere na nyocha 'dị ka' ndị ọzọ na backlinks sitere na isi mmalite ndị ọzọ. Google nwere ike ịbụ karịa eze nke na-abụghị anụ ọhịa na akwụkwọ m.
Ekwenyere m na usoro ehi gị. Naanị m na-atụ anya na ndị folks anaghị esochi ìgwè ehi ahụ n'atụghị anya… Anaghị m ere na nsonaazụ ya na-adịkarị mma karịa ihe na-adịghị mma. Ahụrụ m ndị na-ajụ ụkpụrụ iwu n'anya na ịkwanye envelopu n'anya.